ရုပ်ဆိုးလို့ စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းကို နောင်တရအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တခုလပ်မလေး… - ThutaSone
July 17, 2019 ThutaSone နိုင်ငံတကာသတင်း 0
ရုပ်ဆိုးလို့ စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းကို နောင်တရအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တခုလပ်မလေး
အခုအချိန်မှာ တခုလပ်ဘဝကို ရောက်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးငယ် ကလေးမိခင် တဦးဟာ သူမကို စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းသည် နောက်တ အကြီး အကျယ် ရေ အာင် ပြန်လည် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သူမဟာ နဂို ရုပ်ရည်နဲ့ လားလားမှ မဆိုင်တော့ ဘဲ ရွှေမင်းသမီးလေး ဖြစ်နေပါပြီနော် …. ။
သူမဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသူ ဖြစ်ပြီး ဟိုချီမင်းမှာ နေထိုင် ပါတယ်။ နာမည်ကတော့ Huyen ဖြစ်ပြီး၊ အသက် (၂၈) နှစ်ပါ။ သူမရဲ့ နဂို ရုပ်ရည်ဟာ သာမန် အမျိုးသမီးတွေ လိုသာ ဖြစ်ပြီး၊ သိပ်အဆိုးကြီး မဟုတ်သော်လည်း ကြည့်ပျော် ရှုပျော် ထဲမှာ မပါ ပါဘူး …. ။
ဒါကို ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူက ရုပ်ဆိုးတယ် လို့ အကြောငး်ပြပြီး သူမကို စွန့်လွှတ် သွားခဲ့ တာပါ။ ဒါကို လုံးဝ မကျေနပ်နိုင် ဖြစ်နေတဲ့ Huyen ဟာ သူမရဲ့ ရုပ်ရည်ကို အသွင် တစ်မျိုး ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပလက်စတစ်ဆာဂျရီ ခံယူ ခဲ့ပြီး၊ မမှတ်မိနိုင် လောက်အောင် လှသွားခဲ့ ပါတယ် …. ။ ခင်ပွနး်ဟောင်းရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ဟာ အရင်တုန်းက အချိန်နဲ့ အမျှ သူမရဲ့ ရုပ်ရည် ကိုသာ အပြစ်ဖို့ခြင်း၊ စနောက်ခြင်း၊ နှိမ်ချ ပြောဆိုခြင်း တွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ မကြားချင်မှ အဆုံးပါ ။
ပထမဆုံး ကလေးမွေးဖွားပြီး နောက်မှာတော့ သူမဟာ ဘဝသစ် စဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ် ခဲ့ရာ၊ အောင်မြင်ခဲ့ ပါတယ်နော် …. ။
သူမဟာ ခွဲစိတ်မှုအတွက် ဗီယက်နမ်ဒေါင် သန်း (၁၀၀) အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ထိုစဉ်က အဲဒီငွေပမာဏဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ အားဖြင့်တော့ (၄၅၀၀) ဝန်းကျင်လောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုတော့ သူမရဲ့ အလှအပကို မြင်လိုက် ရတဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းဟာ သူရဲ့ လုပ်ရပ် အတွက် အလွန် နောင်တ ရနေ ပါပြီတဲ့နော် …. ။
credit – နတ်စည်တော် (MyanmarNote)
တက္ကသိုလ်ပထဝီဌာနက ကထိကတယောက်ဖြစ်နေပြီး ယုတ်မာချက်က လွန်ပါရောလား